Radio Don Bosco - Masindahy Jules de Rome
Masindahy Jules de Rome
Naseho ny : 12 avrily 2021
12 aprily — Ny Masindahy Jules resahana amin'ity andor ity dia ilay papa tamin'ny taonjato fahefatra. Jules Voalohany no nahalalana aza, teraka tao Roma ny taona 280 ary nandray ny Fiketrahana Masina ny 06 febroary 337 hatramin'ny 12 aprily 352. Izy no papa faha-35.
Hentitra sy mahay mandray olona i Jules. Niaro an'i Masindahy Athanase tao Alexandrie tamin'ny ariens sy ny mpanohitra ny fampianaram-pinoana niseanina izy. Nanao ny sinaody tao Roma ho fanoherana ny arianisme izy, ary nanentana ny fivoriana ho an'ny Kônsily tao Sardique tamn'ny taona 342. Izy no nanorina tao Roma ny bazilikan'ny Apôstôly 12, nantsoina tamin'izany fotoana izany hoe "Basilca Iuliana".